China AUMARK TX orinasa sy mpanamboatra | Foton
Hihaona amin'ny filàna lozisialy an-tanàna sy an-dàlana ary lavitra.
efitra Laharana tokana / iray sy sasany
NY MIDDLE RANK LDT dia nanolo-tena hivoatra ara-teknika mba hampiroboroboana ny fanavaozana ny CHINESE LDT Hihaona amin'ny tanàna, filàna lozisialy eny an-tanàn-dehibe sy lavitra eo anelanelan'ny tanàna, Volavola ho an'ny vondrona mpampiasa manana filàna ambony ara-toekarena.
Ny motera avo lenta dia afaka mamokatra herinaratra malala-tanana, ary miova malalaka ny boaty fanodinana ZF, mipoaka eo noho eo ny angovo kinetika.
Hery mahery Foton
Maotera BJ493 Series
Torela Max: 202N.m / r / min
Tselatra LOVOL Powerax: 202N.m / r
Masinina Phaser Series
Torela Max: 445N.m / r / min
Biraon'ny kamio nohamafisina
Tafo matevina sy seza be pitsiny
Ny fanandramana fanamafisana ny tafo dia nanamafy fa mahazaka hery lehibe ny tafo. Ny fiarovana sy fampiononana ny mpamily dia ao anaty tranony misy fipetrahana mirindra sy fehikibo azo antoka.
Ny fitaovana ABS safidy dia manatsara ny fahombiazan'ny fiarovana.
Ny sarin'ny kamio dia misy ny fefy feno rivet miaraka amina fehikibo nohamafisina.
Lohataona aorian'ny ravina aoriana: hatramin'ny loharano ravina aoriana 17, ny isa lehibe indrindra amin'ny vokatra mitovy amin'izany, mitondra enta-mavesatra tsara indrindra
Ny chassis dia mampihatra vy mahery, zana-tsipika roa ary kely kokoa ny famolavolana lohataona, mitondra bontolo bebe kokoa saingy kely kokoa. Lavaka mahazatra, ny elatra ambony tsy misy famolavolana rivet, fanovana mora kokoa.
Isuzu Technology Rear Axle: lanja maivana, fahamendrehana sy tanjaka tsara, fitondrana enta-mavesatra be, freins malama